JABUUTI: ”Kenya laguma aamini karo kursiga Afrika ee Qaramada Midoobay, waayo waxay dhibaato ba’an ku haysaa Soomaaliya”! + XOG XASAASI AH | HalQaran.com
Home Wararka Maanta JABUUTI: ”Kenya laguma aamini karo kursiga Afrika ee Qaramada Midoobay, waayo waxay...
JABUUTI: ”Kenya laguma aamini karo kursiga Afrika ee Qaramada Midoobay, waayo waxay dhibaato ba’an ku haysaa Soomaaliya”! + XOG XASAASI AH
Jabuuti (Halqaran.com) – Wasiirka arrimaha dibedda ee Jabuuti ayaa sheegay in Kenya aan lagu aamini karin kursiga ay u tartamayso ee golaha ammaanka, maadaama sida uu yiri uu khilaaf xooggan kala dhexeeyo Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo la hadlay safiirrada ajnabiga ah ee dalkiisa ku sugan ayaa sheegay in Jabuuti ay u baahan tahay codadka dalalkaasi.
“Jabuuti waxa ay qiyaaseysaa inay ku saxan tahay dadaalkeeda ku aaddan raadinta kursiga Golaha Ammaanka, waxa aan u bahanahay taageraada dalalkiina ee ku saabsan musharraxnimadeenna”, ayuu yiri Wasiir Maxamuud Cali.
Wasiir Maxamuud ayaa intaasi ku daray in haddii Kenya ay kursigaas hesho ay saameyn ku yeelaneyso muranka kala dhaxeeya Soomaaliya.
“Waxa aan qiyaaseynaa oo kale in arrinkaa khatar ku hayo Soomaaliya, xaaladda u dhexeysa labada dalna ay cirka isku sii shareeri karto oo ay faraha ka bixi karto”.
“Waxa aan qabaa in dal sidaas khatar u ah uu san ilaalin karin danaha gobolka, qaarada iyo nabadda guud. Haddii uu khilaafka si fogaadana waxa uu saamayn karaa labada dal iyo gobolkaba” ayuu Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti.
Dowladda Kenya ayaa ku guuleysatay taageerada dalalka Midowga Afrika ee ah in ay ku gobolka ku matasho xubinta aan joogtada aheyn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Ugu dambeyn, dowladda Jabuuti ayaa dadaal ugu jirto sidii ugu guuleysan laheyd kursiga matalaadda gobolka ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Kenya laguma aamini karo
kursiga Afrika ee qaramada midoobay